Pceo | Kyaw Chan Thar (KCT) Co., Ltd.
Standard – API SN/CF, ACEA A3/B4
OEM Approval - VW50200, 50500, MB 229.5
Packaging – 1L,4L,200L
Suitable – All Japanese/ Europe Cars
ဆီစားနှုန်းသက်သာခြင်း၊ အေးသောရာသီတွင်ပင် စက်နှိုးရလွယ်ကူခြင်း၊ အင်ဂျင်ချေး(ဂျီး) ထွက်ရှိမှု မရှိသလောက် နည်းပါးခြင်း။
H-Tech 100 Plus 0W20
Standard – API SN, ILSAC GF-5
Packaging – 1L,4L
Standard – API SN/CF, ILSAC GF-5
H-Tech 100 Plus 10W40
Standard – API SN/CF
Specific CRDi Plus 5W30
Standard – ACEA C3
Suitable – Common Rail Direct Injection, Catalytic Converters and Diesel Particulate Filters
ဆီစားနှုန်း သက်သာခြင်း၊ အင်ဂျင်တိုက်စားမှု သက်သာစေသည့် ခိုင်မာသော ဖြည့်စွက်စွမ်းအားရှိခြင်း၊ ဒီဇယ်လောင်စာဆီမှ ထွက်ရှိသော အညစ်အကြေးများကို ချေဖျက်နိုင်ခြင်း၊ အင်ဂျင်အတွင်းချေး(ဂျီး) ထွက်ရှိမှု မရှိသလောက်နည်းပါးခြင်း။
Specific CRDi Diesel 5W40
Suitable – Common Rail Direct Injection Engine ကားများအတွက်
Suitable – Passenger cars equipped with gasoline, LPG, turbocharged or naturally aspirate, suitable for standard and unleaded fuel.
ဆီစားနှုန်းသက်သာခြင်း၊ အင်ဂျင်ပွတ်တိုက်စားမှု သက်သာခြင်း၊ မြို့တွင်း၊ နယ်ဝေး မည်သည့်လမ်းမဆို မောင်းနှင်နိုင်ပြီး အင်ဂျင်နှင့် အင်ဂျင်ဝိုင်သက်တမ်းကို ကြာရှည်စေနိုင်ခြင်း၊ အင်ဂျင်အတွင်း သန့်ရှင်းစေခြင်းတို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း။
Suitable – Turbocharged or naturally aspirate, suitable for standard and unleaded fuel.
ဆီစားသက်သာခြင်း၊ ဈေးနှုန်း သက်သာပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်း၊ အင်ဂျင်အတွင်း ပွတ်တိုက်စားမှုကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။